August 2021 - News 88 Post
विष्णु माझीको वास्तविक जिवनमा मिल्यो ‘चरी जेलैमा’ ?
August 31, 2021 N88LeaveaComment on विष्णु माझीको वास्तविक जिवनमा मिल्यो ‘चरी जेलैमा’ ?
काठमाडाैं । गायिका विष्णु माझीको स्वरमा रहेको तीज गीत ‘चरी जेलैमा’ अहिले सर्वाधिक चर्चामा छ। पुतलीको भट्टी– १७ अन्तर्गत रहेको यो गीतसँगै विष्णुको पनि चर्चा चुलिएको छ। यो गीत एक साताअघि मात्र सपना म्युजिक इन्डष्ट्रिजले युट्युवमा अपलोड गरेको थियो । मंगलवार साँझसम्म चरी जेलैमा गीतको भिडियो १ करोड ५ लाख १६ हजार ४४८ जनाले हेििरसकेका […]
‘विना मगरलाई मन्त्री बनाउन नपाउने तर्क मन परेन’ : गोकुल बाँस्काेटा
August 31, 2021 N88LeaveaComment on ‘विना मगरलाई मन्त्री बनाउन नपाउने तर्क मन परेन’ : गोकुल बाँस्काेटा
काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विना मगरलाई मन्त्री बनाउन नपाउने तर्क गरेको विषय आफूलाई मन नपरेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रचण्डले पार्टी बनाउने र अरुले निर्देशन दिने भन्दै उनले आलोचना समेत गरेका छन् । आज ट्वीट गर्दै उनले माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि एकसाथ व्यङ्ग्य गरेका छन् […]
August 31, 2021 N88LeaveaComment on एमाले भित्रै हुनथाल्यो भीम रावलको चर्को आलोचना, यस्ताे छ कारण
काठमाडौं । सुदुरपश्चिममा निकै पकड बनाएका भीम रावल अहीले आफ्नै गडमा कमजोर बनेका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशका बहुमत सांसदहरुले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलको साथ छोडेर नयाँ पार्टी रोजेका छन् । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सुदुरपश्चिम प्रदेश सभाका १३ जना सांसदहरु नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीतिर लागेका छन् ।माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टीमा मंगलवार १० […]
मुर्मुरिँदै के पी ओली, सभामुखदेखि सर्वाेच्चसम्मकाे खाेइराे खने
August 31, 2021 N88LeaveaComment on मुर्मुरिँदै के पी ओली, सभामुखदेखि सर्वाेच्चसम्मकाे खाेइराे खने
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनीतिलाई कुबाटोमा हिँडाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । नेकपा एमाले झापा–काठमाडौं सम्पर्क समितिले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सभामुख सापकोटा राजनीतिको राजमार्गबाट नहिँडी कान्ला–कान्ला र भीरबाट हिडेको बताएका हुन् । उनले निर्वाचन आयोग पनि संविधान र कानूनको राजमार्गमा हिँड्न छाडेको बताए । […]
महिलालाई उत्ते जित पार्न यस्ता पाँच व्यवहार गर्नुहोस्, ठाउँकाे ठाउँ उत्तानाे परिदिन्छन् कसम !
August 31, 2021 N88LeaveaComment on महिलालाई उत्ते जित पार्न यस्ता पाँच व्यवहार गर्नुहोस्, ठाउँकाे ठाउँ उत्तानाे परिदिन्छन् कसम !
महिलालाई उत्ते जित पार्न यस्ता पाँच व्यवहार गर्नुहोस् यौ; नपार्ट नरबी च समझदारी नभई गरिएको सम्भो ग सुखमय नहुने र खल्लो हुने हुँदा महिलाको सक्रिय सहभा गिता पुरुषको पहिलो रोजाइ हुन्छ ।अमेरिकी विश्वविद्यायलयले गरेको अनुस न्धान अनुसार महिलालाई सम्भो गको बेला उत्ते जित पार्न पुरुषका केही व्यवहार आवश्यक रहेको बताएको छ । राम्रो सम्वाद गर्ने […]
बाढी पहिरोमा परी १५ जनाको मृ’त्यु
August 31, 2021 N88LeaveaComment on बाढी पहिरोमा परी १५ जनाको मृ’त्यु
काठमाडौँ । मुलुकका विभिन्न जिल्लामा भदौ १० पछि आएको भारी वर्षा (भदौरे झरी)मा १५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्वप्रकाश अर्यालले भदौ १० पछिको चार दिनमा बाढीपहिरामा परेर उनीहरुको ज्यान गएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त अवधिमा तीन जना बेपत्ता भएका छन् भने १४ जना घाइते […]
‘सबैसँगको साथ छुट्यो, म एक्लो भएँ’ भन्दै धरधरी राेइन रामकुमारी झाँक्री
August 31, 2021 N88LeaveaComment on ‘सबैसँगको साथ छुट्यो, म एक्लो भएँ’ भन्दै धरधरी राेइन रामकुमारी झाँक्री
काठमाडौं । नेकपा एमालेमा संघर्ष चल्दा दोस्रो तहका नेताहरु माधव नेपालको साथमा थिए । तर जब माधव नेपालले नयाँ पार्टी दर्ता गरे उनलाई साथ दिँदै आएका दोस्रो तहका नेताहरु उनीसंग थिएनन् । नेपाललाई तेस्रो तहका नेता र कार्यकर्ताले मात्र साथ दिए । सुरु देखि अन्त्य सम्म साथ दिए एक नेता थिइन् रामकुमारी झाँक्री । अखिल देखि […]
वाग्मती प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री को ? यी हुन् सम्भावित अनुहार
August 31, 2021 N88LeaveaComment on वाग्मती प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री को ? यी हुन् सम्भावित अनुहार
हेटौडा । बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेका १२ जना सांसदहरुले माधव नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी रोजेपछि मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पमतमा परेकी छन्। १०९ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित ५६ सांसद थिए । त्यसैले भदौ २ गते तत्कालिन प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंले शाक्यलाई एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर दल विभाजन भएपछि नेकपा […]
एमाले फेरि अर्को टुक्रा, ईश्वर पोख्रेलको गुट पनि फुट्यो !
August 31, 2021 N88LeaveaComment on एमाले फेरि अर्को टुक्रा, ईश्वर पोख्रेलको गुट पनि फुट्यो !
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले आफू पार्टी अध्यक्ष पदका लागि योग्य भएको बताएका छन्। काठमाडौंको बसुन्धरामा सोमबार केही पत्रकारहरुसँगको छलफलका क्रममा महासचिव पोखरेलले अध्यक्षका लागि योग्य भए पनि आवश्यक सल्लाहपछि मात्रै अघि बढ्ने बताए। उनले आगामी मंसिरमा हुने पार्टीको १० औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार उठ्ने नउठ्ने विषयमा कार्यकर्ताहरुसँग सल्लाहपछि मात्रै निर्णय लिने पनि […]
दशैं अगावै ठूलै राजनीतिक भूकम्पको खतरा, यसरी दिनदिनै बढ्दै छ दरार
August 31, 2021 N88LeaveaComment on दशैं अगावै ठूलै राजनीतिक भूकम्पको खतरा, यसरी दिनदिनै बढ्दै छ दरार
काठमाडौं । न देशभित्रको राजनीतिक परिस्थिति सामान्य छ न त दक्षिण एशियाको भूराजनीति सामान्य अवस्थामा छ । देशमा कुनै ठूलै राजनीतिक भूकम्पको संकेत देखिदैछ । २१ भदौसम्म प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कित्ताकाट गर्न निर्वाचन आयोगले समय तोकिदिएको छ । अध्यादेश अनुसार २२ दिनभित्र कित्ताकाट गरे पद गुम्दैन भनिएको छ । फुटेका दलहरु नेकपा एमाले […]